Sodon-guurada May 2021 awgeed, Maxay Tahay In Aan Is Weydiino? • Oodweynenews.com Oodweyne News
Sodon-guurada May 2021 awgeed, Maxay Tahay In Aan Is Weydiino?
Q. M – Haaruun
“Wax-is-weydiinni ma Xumee, Wax-is-waydaarin taa Daran!”
(Hees baa tuducyadaasu ka mid ahaan jireen)
Sanadguurada 30aad ee qadiyadda gooni-isu-taagga Somaliland ayaa soo dhow, waana munaasabad muhiimadeeda leh. Muhiimadda taas ah ma qabo in lagu muujiyo durbaanno iyo sacab keliya. Sodonkaas sanadood marnaba si micno leh, oo caadifaddu ku yartahay, ama kaba madhantahay loogama doodin jihada loo socdo, iyo hadiiba jidka lagu taaganyahay uu yahay kii saxda ahaa. Kolka la doodo ee maskaxda la tuujiyo, wax kasta oo hagaagsani si uu ku sii hagaago ayaa soo baxda, wixii khasaare ah na wuu qaawismaa, dabeeto laga tashadaa sidii looga gudbi lahaa. Talada aadmigu surmo-seegto ma weydo, sidaas darted, in dib-u-eegid joogto ah lagu sameeyo wax kasta oo la wado waa lama huraan. Hadii taas la diido, ama si uun looga gaabiyo, meeshaas khasaare ka eeg.
Si kastaba, aniga oo fikirkaas xaalad-qiimaynta ka duulaaya, sodonka sanadood ee soo socda na maanka ku haya, waxa aan is waydiinayaa, hadiiba ay si uun suurtagal u tahay in dadka waxgaradka ahi ay sanadguuradaan uga faaiidaystaan fursad si dhab ah loogu qiimeeyo dhib iyo dheefba wixii wakhtigas la soo mutay, iyo sidii wixii wanaag ah loo sii wanaajin lahaa, wixii khasaare ah na looga weecan lahaa. Sodonka sanadood ee kuwan tegay xiga, sidii ay u ekaan lahaayeen baa u baahan in la is waydiiyo oo sawir fiican laga haysto, iyada oo sodonka tegay iyo sodonadii ka horeeyay laga dhimbiil qaadanaayo. Calamo iyo durbaano waa wax saacado kooban ku eg, dhaxal na aan lahayn. Wax intaas ka gun dheer, oo dhaxal na reeba ayaa la curin karaa aniga sida ay ila tahay, in aan qaldanahay na waa suurow.
Tusaale ahaan, hadii shicib iyo xukuumad ba la isugu tago, waxa la qaban karaa shir dhowr maalmood socda, oo si dhab ah, oo aqooni ku dheehantahay, looga doodo qodobo dhowr ah, sida:
1. Wax-wada lahaanshaha iyo midnimada dadka dhulkaas ku wada dhaqan, oo si kasta oo xaalku ku dambeeyo ba, koley iyo koleyba is hurran – qodob dood fiican u baahan weeye.
2. Qadiyadda aqoonsiga ama aqoonsi doonka, taas oo ahayd, welina ah, qodobka u gu culus ee 30 gaas sanadood la hadal hayay marba heer uu joogayba, cid mudadaas si dhab ah oo furan uga dooday na aanay jirin, ayaa iyaduna qodob lama dhaafaan ah noqonaysa. Aqoonsigu suurtagal horta ma yahay? Hadii uu yahay, 30 gaas sanadood maxaa loo heli waayay? Hadii aanu ahayn, jid/jidad kale oo noocee ah baa noo furan?
3. Nidaamka dawladnimo ee qaabka Madaxweynaha ku salasan, oo 30 sanadood ka hor loo arkaayay kan u gu wacan, ay manta se ka soo baxeen dhaliilo waawayn oo ka tashi u baahan, ayaa iyaduna is waydiin micno leh u baahan. Ma la heli karaa hanaan ka munaasibsan, oo nidaamka dhaqan-dhaqaale ee dadku leeyahay na la jaan qaadi kara? Nidaamka Madaxweyne ee Afrika, hayadaha kale oo dhan baa shiikha, taladu na hal qof uun bay ku ururtaa, taas oo dhib badan iyo dheefteeda ba leh. Soddonka sanadood ee soo socda hanaankaas miyaa la sii wadayaa, mise wax baa laga bedelayaa? Waa qodob dood u baahan, kaas oo muhiimadiisa lahaan doona si kasta oo masiirka Somaliland ku dambeeyo.
“Wax-is-waydiini ma xumee, Wax-is-weydaarin taa daran.” Saw ma aha?
Q: Maxamed Haaruun – mbiixi@gmail.com